Sidee Kenyatiga uga falceliyeen heshiiska Janan iyo Dolwadda Federalka? | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Sidee Kenyatiga uga falceliyeen heshiiska Janan iyo Dolwadda Federalka?
Sidee Kenyatiga uga falceliyeen heshiiska Janan iyo Dolwadda Federalka?
Saxaafadda Kenya oo bedeshey sidii ay uga hadli jirtay Cabdirashiid Janan, ayaa qiratay arrin ay Kenya horay u diidanayd, isla markaana ay xitaa inkireen Guddigii Xaqiiqo Raadinta ahaa ee IGAD ee ay Jabuuti hoggaaminaysey, kuwaasoo sheegay inaysan arkin wax faragelin ah oo ay Kenya samaysay iyo ciidan dhankeeda jooga toona.
The Nation ayaa qoray in Cabdi Janan uu Mandheera ku dhuumaalaysanayey tan iyo bishii Diseembar 2019-kii isagoo baxsad ka ahaa DF Somalia oo uu kasoo fakaday.
”Wuxuu ku dhuumanayey magaalada Mandheera, woqooyiga Kenya kaddib markii uu kasoo baxsaday xabsi ku yaalla Muqdisho bishii Diseembar 2019-kii,” ayaa lagu qoray wargayska.
Intaa kuma ekaane wuxuu kaloo qiray arrin ay iska indha tiri jirtey Dowladda Kenya oo marti gelineysey Cabdi Janan iyo malliishiyaadkiisa, taasoo ahayd inay dhowr jeer dadwaynuhu kasoo dacwoodeen inaysan Mandheera hayn karin malliishiyaad hubaysan.
”Is dhiibistiisu waxay nefis u noqonaysaa dadwaynaha Mandheera oo uu Cabdi Janan halis amaan dhowaanahan ku ahaa.” ayuu raaciyey wargayska The Nation oo sidoo kale qiraya in dagaalladii halkaa ka dhacay ay magaalada saameeyeen, waxay kaloo qoreen in ”ninkani uu wiiqmay oo uusan haysan xal kale oo aan ka ahayn inuu is dhiibo.”
Waxay kaloo carra baabeen xeradii uu saldhigga ka dhiganayey oo ay ku sheegeen Kapedo Camp taasoo ay sheegeen inaan weli la xirin xitaa markii uu warkan cusubi soo baxay.
Kenya ayaa ku doodaysey inaysan gabbaad siinin wax malliishiyaad Soomaaliyeed ah, iyadoo aad u inkiri jirtey in Janan uu joogo gudaha Mandheera, balse ku doodaysey inuu joogey dhanka Somalia marka la eego xadka haatan.